Guddiga baarlamaanka ee gaadiidka oo digniin u diray qandaraasleyda aanan wadooyinka dhameystirin – The Voice of Northeastern Kenya
Guddiga baarlamaanka ee gaadiidka oo digniin u diray qandaraasleyda aanan wadooyinka dhameystirin
Baarlamaanka dalka gaar ahaan guddiga gaadiidka ayaa soo saaray digniin uu u jeedinayo qandaraasleyda loo ogolaaday inay dhisaan wadooyinka kala duwan.
Guddigan ayaa sheegay in qof ama shirkad waliba oo howshaasi loo xilsaaray oo aan si tayeysan u fulin hadda kadib laga mamnuucayo qandaraasyada.
David Pkosing oo ah guddoomiyaha guddiga gaadiidka ee golaha qaran ee sharci dejinta ayaa hoosta ka xariiqay inaan la ogolaan doonin in kheyraadka dadweynaha lagu lunsado waddo sida habboon aanan loo dhisin.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay inay khasab tahay in cid kasta oo shaqadaasi qabanayso ay uga soo baxdo sidii lagu heshiiyay.
Mr. ayaa walaac ka muujiyay in qandaraasleyda qaar aysan waqtigii loo qabtay ku dhameystirin mashaariicda la xiriira wadooyinka.
Xildhibaankan oo laga soo doortay koonfurta Pokot ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan wadooyinka la dhisay ama dayactirka lagu sameeyay.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka baarlamaanka, guddiga waxbarashada ayaa baaritaano uu sameeyay kadib sheegay in bishii lixaad gabadh lagu faraxkumeeyay dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi magaaladatani Nairobi.
Waxaa xiligaasi soo baxay warar iskhilaafsan hasa ahaate xubnaha guddiga tacliinta ee baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday inay kenyaanka u xaqiijinayaan inay faraxumeyn xaruntaasi ka dhacday.
Waaxda dambi baarista ee dalka ayaa loogu baaqay inay si qota dheer u eegto xadgudubka dhacay.
Wasaaradda waxbarashada ayuu guddigan u soo jeediyay in dhamaan dugsiyada dalka lagu rakibo kameerada qarsoon ee muuqaalada duubta ee loo yaqaano CCTV-da.
Sido kale soojeedinta waxaa ka mid ah in maamulayaasha dugsiyada ay xaqiijiyaan in ugu yaraan hal macalin oo ardayda ay isku jinsiyad yihiin uu weheliyo xiliga ay ku guda jiraan casharada dheeraadka ah ama arrimaha kale ee aanan si toos ah ula xiriirin waxbarashada.
← Dalka Ciraaq oo madaxweyne cusub loo doortay
DHAGEYSO warka duhurnimo ee idaacada star fm 1:30PM 03-10-2018 →